साताको पहिलो दिन आज आइतबार यति धेरैले बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. – SUDUR MEDIA
March 21, 2021 March 21, 2021 AdminLeaveaComment on साताको पहिलो दिन आज आइतबार यति धेरैले बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य ! हे’र्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…..
आज साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मू’ल्य बढेको छ । आज चैत ८ गते आइतबार सुन तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ ।
आजको दिनमा छापावाला सुन प्रतितोला ८७ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदीको व्यवसायी महासंघको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आज तेजाबी सुन प्रतितोला ८६ हजार ७५० रुपैयाँमा खरिदबिक्री हुँदैछ । अघिल्लो साताको अन्तिम कारोबार दिन सुन तोलामा ५०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ८६ हजार ७०० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यसैगरी चाँदीको भाउ पनि आइतबार वृद्धि भएको छ । यस दिन चाँदी पाँच रुपैयाँले उकालो लागेर प्रतितोला एक हजार २८० रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ । शुक्रबार भने चाँदी तोलामा १५ रुपैयाँले प्रतितोला एक हजार २७५ रुपैयाँमा तोकिएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः सिङ्गो गाउँकै पुर्जा अरुको नाममा ! नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिका–४ हसौरा क्षेत्रका स्थानीयवासी आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको पुर्जा अर्कैको नाममा हुँदा चिन्तित बनेका छन् । हसौरा, चिलाहा, सालघारी, चिलाहा खोलापारि, स्कूलटोल, बगनासे, कुसनरी, सातबिघा, बीचटोल, ढुङ्गेनीका बासिन्दा पुर्जाविहीन बन्दा समस्यामा परेका छन् । लामो समयदेखि बसोबास गरेको जमिन भूमाफियाले आफ्नो नाममा पुर्जा बनाउँदा यस क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेका हुन् ।
विसं २०३१ देखि बसोबास गरेको बताउने मायाराम थारूको जग्गाको समेत भूमाफियाले आफ्नो नाममा पुर्जा निकालेका छन् । “यहाँ केही थिएन मलगायत केही व्यक्तिले झाडी फाँडेर बस्यौँ, त्यो बेला वनको क्षेत्र भनेर मलाई त समातेर भैरहवा जेलमा समेत थुनियो”, मायारामले भन्नुभयो, “पछि धरौटीमा छाड्यो, तर आफैँले भोग गरेको जमिनको भने भूमाफियाले पुर्जा निकाले ।” आफैँले भोग गरेको जग्गा समेत भूमाफियाले गाउँमै नआई पुर्जा बनाएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
विसं २०३१ देखि बसोबास गरेको भए पनि २०५५ मा भने आफ्नो जग्गा भूमाफियाले पुर्जा बनाएर कब्जा गरेको थारूको भनाइ छ । उहाँजस्तै यहाँका धेरै घरपरिवारको बसोबास रहेकाले जग्गाको पुर्जा अर्कैको नाममा छ । विसं २०५४ मा फिल्डबुक कायम गरी विसं २०५५ मा मालपोत कार्यालयले पुर्जा वितरण गरेको थियो । सो समयमा विभिन्न ठाउँका करिब २०÷२५ जनाले आफ्नो नाममा पुर्जा बनाए । अहिले पनि यहाँ बसोबास गर्नेहरुको जग्गाको पुर्जा अर्कैको नाममा रहेको स्थानीयवासी गोपी शर्माले बताउनुुभयो । पुर्जा गतलरूपमा निकालेको भनेर सो समयमा तत्कालीन गाविस कार्यालय, मालपोत घेर्ने काम गरेपछि मालपोत कार्यालयले पुर्जा बदरको काम अगाडि बढाएको थियो तर मालपोत कार्यालय आफैँले जारी गरेको पुर्जा पुनः सच्याउन नमिल्ने भनी अदालतले आदेश दिएपछि बसोबास गरेका व्यक्तिभन्दा अरुकै नाममा पुर्जा कायम भएको हो । शिवमन्दिर क, ख र ग को नक्सामा जोतभोग गर्नेभन्दा फरक व्यक्तिको नाममा पुर्जा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ को पहिलो एपिसोड हेर्नुहोस ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
युवतीको ग’म्भीर आ’रोप पछि नायक किशोर खतिवडा युवतीसंगै आए मिडियामा, दुवै एक साथ बसेर मिडिया सामु दिए यस्तो स्पस्टिकरण ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)